Farmaajo oo raaligelin ka bixiyey duulaankii dowladii kacaanka ee Somaliland
Farmaajo oo raaligelin ka bixiyey duulaankii Siyaad Barre ee Somaliland
Hadalka madaxweynaha Soomaaliya ayaa imaanaya iyaddoo uu dhowaan la kulmay Muuse Biixi Cabdi.
MUQDISHO, Soomaaliya – Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa si furan raaligelin kaga bixiyey dhibaatooyinka dowladdii Siyaad Barre kula kacday goboladda waqooyi ee loo yaqaano Somaliland.
Isagoo ka hadlayay xiritaanka Shirka Garsoorka Soomaaliya oo ka socday xerada Xalane ee Muqdisho ayuu hadalkaan sheegay, maanta oo Khamiis ah, 13-ka Febraayo, 2020.
"Wixii Wuqooyi ka dhacay ma ahayn Koofur oo wuqooyi ku duushay,wax qabiil ku saleysanna ma ahayn,waxay ahayd Sistam dowli ah oo markaas jiray, anigoo madaxweynihii Qaranka ah inaan cudurdaarkaas sameeyo oo aan gaarsiino walaalaheen adinkuna aad ila qaadataan ayaa loo baahan yahay," ayuu ku yiri bartamaha hadal-jeedintiisa.
Isagoo hadalkiisa sii wata isla markaana xoojinaya raaligelinta ayuu ku daray "madaxweyne ahaan cudur daar ayaan ka sameynayaa waana ka raali galinayaa dadka dhibku ka soo gaaray nidaamka dowliga ah".
Sidoo kale, Farmaajo ayaa ugu baaqay jabhadihii la dagaalamay dowladdii kacaanka ee Soomaaliya ayuu ugu baaqay in ay dhankooda bixiyaan raaligelin buuxda si leysku cafiyo.
Hadalka kasoo yeeray Farmaajo ayaa imaanaya iyaddoo maalin kahor caasimadda Itoobiya ee Addis Ababa uu kula kulmay Muuse Biixi Cabdi, hogaamiyaha Somaliland.
Wallow la xaqiijiyey in is-aragu ahaa mid aan horey loosii qorsheyn isla markaana aanu jirin ajande gaar ah, labada dhinac waxay ku qeexeen mid horudhac ah u noqon kara "wadaxaajoodyadda mustaqbalka dhow".
Raaligelin laga bixiyo shacabka ku geeriyooday duulaanka dowladdii kacaanka ayaa kamid ahaa shuruudihii uu maamulka Hargeysa had iyo goor miiska soo saarayey tan iyo markii ay ku dhawaaqeen gooni u goosad 1991-dii.
Somaliland ayaa ka biyo diiday dhawaan qorshe cusub oo lagu soo celinayo wadahadalladii lagu...
Somalia: Iska Horimaad Xoogan oo ka dhacay Muqdishu
Soomaliya 26.07.2017. 14:47
​Mukhtaar Roobow oo diiday Dalab uga yimid kooxda Al Shabaab
Soomaliya 21.07.2017. 15:47
Somaliland oo ka jawaabtey guddigii uu magacaabay Farmaajo
Somaliland 18.07.2019. 18:14